DHEGEYSO: ”Waxaan u shaqeeyaa hooyaday oo umi ah & walaalkay oo jirran, anigoo ka dhuumanaya dowladda Sweden!!” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: ”Waxaan u shaqeeyaa hooyaday oo umi ah & walaalkay oo jirran,...
DHEGEYSO: ”Waxaan u shaqeeyaa hooyaday oo umi ah & walaalkay oo jirran, anigoo ka dhuumanaya dowladda Sweden!!”
(Stockholm) 10 Sebt 2019 – Waaxda Socdaalka Sweden ayaa sheegtay in ay Sweden ku dhuumaalaysanayaan in ka badan 11,000 oo qofood oo loo jaray xukun ah in dalka laga musaafuriyo kaddib markii la diidey codsigoodii magangelyo doonnimo ee ay ku doonayeen inay ku noolaadaan Sweden.
Waxaa dadkaa ka mid ah gabar 19-jir ah oo la yiraahdo “Maja” kana soo jeedda Afghanistan, taasoo 3 jeer diidmo laga siiyay dalka Sweden. Waxay Maja si dhuumaalaysi ah ugu nooshahay Sweden, waxaanay ka hadlaysaa sababta. ”Ma aqaanno waxa dhici raba, in badan baan ka fikiraa wixii aan samayn lahaa, balse ma doonayo inaan ku laabto Afghanistan.’’ Ayay tiri Maja.
11-ka kun ee ku dhuumaalaysanaya Sweden 1,200 kiis oo ka tirsan waxaa loo gacan geliyay Booliiska ilaaliya xuduudaha Sweden ee Gränspolisen, gaar ahaan booliis goboleedka Bergslagen, sida uu qabo Hans Pont oo qaybtaa madax u ah, way adag tahay in lasoo helo dadka noocan ah.
”Haa waa sax, maxaa yeelay dadkani cinwaan uma reebaan Waaxda Socdaalka, sidaa darteed ma naqaanno meel aanu ka raadino, balse waa dhacdaa inaan mararka qaar helno xogsiin hoose oo ku aaddan halka qofka laga heli karo,’’ ayuu yiri Pont.
Maja ayaa Sweden kula dhuumaalaysanaysa hooyadeed oo umi ah oo aan wax akhrin ama qorin iyo walaalkeed oo jirran, waxaana ugu sii daran in maadaama aysan lahayn rukhsadda ama iqaamadda ku noolaanshaha Sweden ee loo yaqaanno Uppehålstillstand aysan xaq u lahayn caawin ay ka hesho dhanka dowladda iyo bulshada sida guri iyo lacag ay biilato.
”Markii nala siiyay diidmadii ugu dambaysay, waxaana garowsaday inaan qofna na caawin doonin, sidoo kale nalooma ogola inaan shaqaysanno, si kastaba, shaqo suuq madow ah ah ayaan helay, lacagtu waa yar tahay, ha yeeshee waxaan ku helnay guri yar oo aan degno iyo cunno ay ila cunaan hooyaday iyo walaalkay,’’ Ayay raacisay Maja.
FG: Maja ma aha magaca saxda ah ee gabadha aan waraysannay.
Previous articleSomalia waataa iyadoo FASHILAN oo faqri ah ka lulanaysaa fiiqa fog ee Afrika (Yaa ka mas’uul ah?!)
Next article6 Talo ANFACAYSA xiddigaha xulka qaranka Somalia (Fadlan halla gaarsiiyo)